Vechidiki Vozeya Musangano weAfrica-Europe Youth Summit Uchaitira kuIvory Coast
A-E youth summit
Vamwe vechidiki vanoti vanofanirwa kuwaniswa mukana wekupinda mune zvematongerwo enyika kusanganisira kuvewo muzvigaro zvakakosha muhurumende kana mumapato ezvematongerwo enyika, pamwe nekupinda mune zvemabhizimisi kuitira kuti vagokwanisa kugadzirisa matambudziko avanosangana nawo mukurarama kwavo zuva nezuva.
Pfungwa idzi dzabuda pamusangano wekuzeya zvinhu zvinobata kana zvakakoshera vechidiki waitwa neMuvhuro muBulawayo nemasangano akasiyana-siyana kunyanya ayo anoshanda nevechidki.
Musangano uyu wange uri mumwe wemisangano miviri yekubuda negwaro richaendwa naro kumusangano wechina weAfrica-Europe Youth Summit uyo uchaitwa kuAbidjan kuIvory Coast svondo rinouya.
Gwaro rimwe chete richazoendeswawo kumusangano wechishanu pakati pevatungamiri venyika dziri muAfrican Union vatungamiri venyika dzeEuropean Union uyo uchaitwa kuAddis Ababa nekuBrussels pakupera kwemwedzi uno nepakutanga kwemwedzi unouya.
Murongi wemabasa musangano re #This Constitution Our Constitution, mumwe wevamwe vange varipo pamusangano uyu, Muzvare Abigail Mupambi, vatsigirana nepfungwa yekuti zvakakosha kuti vechidiki vawane mukana wekupinda mune zvematongerwo enyika sevatungamiriri.
Mukuru wesngano reZimbabwe Organisation for Youth in Politics, VaNkosilathi Moyo, vati zvakakoshawo kuti vechidiki vakwanise kusangana vachitaura pamusoro pezvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira zvebudiriro yavo, pasina anovashungurudza.
Nhengo yeWomen of Prayer Zimbabwe, Muzvare Faith Mvududu, vati vechidiki vemunyika vanoshushikanawo nenyaya yekuti dzidzo yavari kuwana haina zvakawanda zvairi kubatsira kune ivo vechidiki pachavo kana kubudiriro yenyika, vachiti nyaya iyi ndeimwe inofanirwa kugadziriswa.
Mukuru wesangano weNational Association of Youth Organisations, VaMisheck Gondo, vatsinhirawo kuti vechidiki vane zvinhu zvakawanda zvavanoda kuti zvigadziriswe kusanganisira nyaya yekuti nyika ive nehushamwari hwakanaka nenyika dzepasi rose kuitira kuti vemabhizimisi vekunze vagofarira kusima mari muno hupfumi hwenyika hugogadzirika.
Vatiwo nyaya yekuti dzidzo yave kudhurira veruzhinji ndeimwe nyayawo yabuda pamusangano uyu vachitiwo vane chivimbo chekuti zvataurwa nevechidiki zvichateererwa nevatungamiri venyika.
Mumwe musangano wakadai uchaitwa muHarare svondo rino risati rapera.